Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Eurovision 2019 | Iindaba zeGajethi
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Eurovision 2019
Ukhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision, eyaziwa ngokuba yi-Eurovision, wazalwa ngo-1956 njengokhuphiswano lukamabonwakude abathatha inxaxheba kulo abameli boomabonakude bakarhulumente abanamazwe angamalungu e-European Broadcasting Union. Nangona igama linokubonisa ngenye indlela, lo mnyhadala ungabonakaliswa kulo naliphi na ilizwe nokuba indawo ekuyo ayikho eYurophu.
NgoMgqibelo olandelayo, nge-18 kaMeyi, umncintiswano weNgoma ye-Eurovision uza kubanjelwa omnye unyaka, umnyhadala obanjelwe eli xesha kwa-Israyeli, ilizwe apho ophumeleleyo kuhlobo lwangaphambili evela khona. Ukuba uyafuna Yazi yonke into enxulumene noMncintiswano weNgoma ye-Eurovision 2019, imihla, amaxesha, inkqubo yokufumana amanqaku, abagqatswa kunye nabanye ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Amazwe athatha inxaxheba kwi-Eurovision 2019
2 Ezithandwayo zokuphumelela i-Eurovision 2019
3 Isebenza njani inkqubo yokuvota kwi-Eurovision
4 Apho kubanjelwe khona uKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision
5 Apho uza kubona uKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision 2019
6 Iishedyuli zoKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision 2019
7 Ulandela njani uMnyhadala ukuya kumzuzu kwi-smartphone yakho
8 Iminqweno ye-Eurovision
Amazwe athatha inxaxheba kwi-Eurovision 2019
Kuhlelo lwango-2019, angama-41 amazwe athe aziswa ukuba akwazi ukuphumelela ushicilelo lwango-2019 lwalo khuphiswano, kodwa ayingabo bonke abaza kubakho kumdlalo wokugqibela, kuba ngaphambili ibibanjelwe amagqibela kankqoyi amabini, ngomhla we-14 nowe-16 kuMeyi. bazakushiya abagqwesileyo bokugqibela abaza kongezwa ISpain, iJamani, i-Itali, iFrance ne-United Kingdom njengamazwe amahlanu asekwayo e-Eurovision, ukongeza kwa-Israyeli, ngokubamba umbhiyozo walo nyaka.
Amazwe amahlanu aseke i-Eurovision, akhetha minyaka le ngokuthe ngqo ukuphumelela ibhaso ngaphandle kokudlula ngesihlunu semina sokugqibelangaphandle kwesikhundla abasifumene kunyaka ophelileyo. Ngokuzenzekelayo, kule minyaka idlulileyo, la mazwe ikwizikhundla zokugqibela zokuhlelwa, ngaphandle kwentshisakalo abahamba nayo.
Alibhaniya UJonida Maliqi Ktheju tokës
Armeniya Srbuk Ukuhamba phandle
Ostreliya UKate Miller-Heidke Ubunzima beZero
Ostriya Paenda Imida
Azerbaijan Chingiz inyaniso
Bhelarusi UZena Yithande
EBelgium UEliot Vuka
Croacia Roko Iphupha
ECyprus UTamta Dlala
Republic yaseCzech ILake Malawi Umhlobo Womhlobo
EDenmark Leonora Uthando lukho ngonaphakade
ESlovenia UZala Kralj kunye noGasper Santi Sebi
España Miki Ibhendi
Estoniya UVictor crone isaqhwithi
EFinland UDarude kunye noSebastian Rejman Jonga kuse
EFransi UBilal Hassani Kumkani
Georgia Oto Nemsadze Qhubeka uhamba
Alemania I-St! Sters Usisi
EGrisi UKaterina duska Uthando olungcono
Hungary UJoci Pápai Az kwiapám
Ireland USarah McTernan 22
Sirayeli UKobi marimi Ikhaya
Italia UAlessandro mahmood Soldi
ILatvia carousel Ngobo busuku
isiLithuwaniya UJurij Veklenko Baleka neeNgonyama
Malta UMichela lonwabu
Moldova UAna Odobescu Hlala
Montenegro Umz IHaver
Masedoniya UTamara todevska Ziqhenye
ENorway NGOKU Umoya esibhakabhakeni
EPolonia Tulia Umlilo wothando
Photshugo UConan Osiris Telemoveis
ERomania UEster Peony NgeCawa
Russia USergey Lazarev Meme
San Marino Serhat Yithi Na Na NA
serbia Nevena Bozovic Kruna
Suecia UJohn lundvik Kude emva kothando
ESwitzerland ULuca hanni Uye wandifumana
ENetherlands UDuncan laurence Arcade
EUnited Kingdom Michael Rice Kukhulu kunathi
Ezithandwayo zokuphumelela i-Eurovision 2019
Iibhukumeyikha azisivumeli nje ukuba sibheje ngezemidlalo, kodwa zingene kwihlabathi lengoma nge-Eurovision. Ngokwababhuki abaninzi, kubathathi-nxaxheba abangama-41, Kuphela zi-9 ezime ngaphandle. Kwisikhundla sokuqala kunye nezinye iindlela zokuphumelela umnyhadala nguDuncan Laurence osuka eNetherlands, alandelwe nguJohn Lundvik waseSweden kunye nomfazi ongumFrentshi uBilan Hassani.
Kwindawo yesine ngamathuba okuphumelela sifumana i-Russian Sergey Lazarev, elandelwa ngu-Australian Kate Miller-Heidke kunye no-Chingiz wase-Azerbaijan. I-Itali, iSwitzerland neMalta zikwindawo yesi-7, yesi-8 neye-9 ngokhetho oluninzi lokuphumelela uKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision 2019. Kwakhona, ISpain ayiphumelelanga kwiintandokaziNgaphandle kokutshintsha ngokupheleleyo ubhaliso kunye nomgqatswa obonisa lo nyaka, xa kuthelekiswa nohlelo lwangaphambili.
Isebenza njani inkqubo yokuvota kwi-Eurovision
Amazwe anika amanqaku Amanqaku ali-12 kwingoma oyithandayo. Ingoma yesibini abayithande kakhulu ifumana amanqaku ali-10, ngelixa elelesithathu. Ukusuka apho amanqaku ancipha nganye nganye. Xa kuthe kwabakho iqhina nangenxa yengxabano eyavela ngo-8, xa amazwe amane (i-France, iSpain, i-United Kingdom ne-Netherlands) aphumelela i-Eurovision Song Contest ngoqhina ngonyaka emva koko batshintsha imithetho.
Kwimeko apho iingoma ezimbini okanye ezingaphezulu zifumana amanqaku afanayo, Ilizwe eliphumeleleyo liya kuba lelona lifumene amanqaku ali-12 amaxesha amaninzi kuvoto. Ukuba iqhina liyaqhubeka, elona nani liphezulu leevoti zamanqaku ali-10 liya kuqhubeka ukubalwa njalo njalo. Kwakungowe-1991, xa amazwe amabini abambana kwakhona kumdlalo wokugqibela (eFrance naseSweden), bafumana amanqaku ali-146.
Gqibela ISweden yaphumelela okoko ngaphandle kokubotshwa kwinani lamazwe abanike amanqaku ali-12, khange kube njalo ngenani lamazwe abanike inqaku lokuqala. ISweden yavotelwa ngamazwe angama-1 ngamanqaku ali-5 ngelixa iFrance yanikwa amanqaku ayi-10o ngamazwe ama-4.
Apho kubanjelwe khona uKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision
Lo nyaka ubhiyozelwa kwa-Israyeli. Isizathu asikho enye ngaphandle kokhuphiswano luyazilawula. Ezi zixela ukuba ilizwe eliphumeleleyo liya kujongana nokubhiyozela ushicilelo lonyaka olandelayo. Ukusukela ngo-1957 lo mthetho ubusoloko uthotyelwa ngaphandle kwezihlandlo ezihlanu, ezine zazo zikhuthazwa yinto yokuba amazwe ebengenakuthwala iindleko eziphezulu zombutho. Kwisihlandlo esinye kuphela, ophumelele ukhuphiswano akanakulungiselela kwilizwe lakhe kuba akanakunikezela ngendawo efanelekileyo yomnyhadala.
Apho uza kubona uKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision 2019
Ukusukela kupapasho lwayo lokuqala, kwaye njengomsunguli walo mnyhadala, ekuphela kwejelo oya kuthi ube nakho ukubona kulo ukhuphiswano bukhoma luyaqhubeka I-1 ye-RTVE eSpain. Ukuba ukwilizwe elithatha inxaxheba kolu khuphiswano, uya kuba nakho nokulujonga ngejelo loluntu elihambelanayo. Kodwa ukongeza, unokundwendwela iwebhusayithi ye-RTVE ukulandela umcimbi uphile okanye usebenzise isicelo esisemthethweni seEurovision kwizixhobo eziphathwayo.
Iishedyuli zoKhuphiswano lweNgoma ye-Eurovision 2019
Njengakwiminyaka edlulileyo, okokugqibela kukhuphiswano lweNgoma ye-2019 Eurovision iya kuqala ngo-21: XNUMX ebusuku, ixesha leSpanish. Kodwa ukuba ngaphambili ubufuna ukubona imidlalo yamanqam, uya kukwazi ukuyenza kwangaxeshanye ngolwesiBini we-14 nangoLwesine we-16 Meyi, nangona ngeli xesha izakuba kwiLa 2 de RTVE.
Kwakhona ungayilandela ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni ye-RTVE okanye ngokusebenzisa isicelo esisemthethweni sezixhobo eziphathwayo zeNdibano yengoma ye-Eurovision, apho unokuvota nengoma oyithandayo kakhulu kwaye ulandele uvoto ngqo.
Ulandela njani uMnyhadala ukuya kumzuzu kwi-smartphone yakho
Enkosi kwisicelo esisemthethweni esifumanekayo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, unokuxelelwa ngalo lonke ixesha ngeendaba kunye neevidiyo zabo bonke abathathi-nxaxheba. Ngaphandle koko, nayo ungavotela ilizwe lakho olithandayo kwaye ulandele uvoto ngqo. Ukuba awunayo ithelevishini ekufuphi ukuze ukwazi ukulandela olu hlelo, ungayenza le sicelo.
Ungenelelo lweNgoma yeEurovision
Umthuthukisi: ndixelele GmbH
I-Ireland lilizwe eliye laphumelela uninzi lwamanqaku, amaxesha asixhenxe, ngelixa iNorway ililizwe eliye lagqibela ngamaxesha (amaxesha ali-7). Kodwa i-icing kwikhekhe ithathwa yiPortugal, ilizwe elinamangenelo angama-10, kuphela li-50 kuphela elikwazileyo ukungena kwi-10 ephezulu.
Umhobe we-Eurovision ngumsebenzi wenkolo wenkulungwane ye-XNUMX onesihloko Iteum iqulunqwe nguMarc-Antonie Charpentier.
Elona nani liphezulu lamazwe afikelela kumdlalo wamagqibela kankqoyi angama-26. Ngenxa yenani elikhulu lamazwe athatha inxaxheba, kubanjelwe iimidlalo ezimbini zokugqibela semihla yokugqibela.
ISpain, iFrance, iJamani, i-Itali kunye ne-United Kingdom zihlala zikumjikelo wokugqibela njengoko zingabasunguli balo khuphiswano.
Elona nani liphezulu labantu eqongeni kwintsebenzo nganye yi-6.
Akunyanzelekanga ukuba uhlale okanye ubuzwe belizwe ukuze ube nakho ukuthatha inxaxheba ukuyimela, enguCeline Dion kwi1998 emele iSwitzerland. Omnye umzekelo uyafumaneka xa iLuxembourg yathumela uNana Mouskouri (isiGrike).
Xa yaqala ukusasazwa, uninzi lwamakhaya aseSpain ayengenayo umabonwakude kwaye usasazo lwayo lwalunomathotholo.
Umxholo wepolitiki awuvumelekanga, ukuthintela izimvo zezopolitiko ekuchaphazeleni ivoti, nangona kurhanelwa ukuba uhlala ucwangcisile kulo msitho.
Umculo weengoma uhlala urekhodwa, ngelixa amazwi, ewe, kufuneka aphile.
Ukuza kuthi ga ngoku, lilonke ilizwe lama-52 lithathe inxaxheba, ngaphezulu kwesiqingatha (27) sele likwazile ukuphumelela ngaxa lithile.
Ubude beengoma obuphezulu yimizuzu emi-3 ubuncinci imizuzwana eli-10. Kungenxa yokuba ngo-1957, u-Italiya Nunzio Gallo wavela ngengoma yemizuzu emi-5 kunye nemizuzwana eli-9, ephezulu kakhulu kunaleyo yabathathi-nxaxheba.
Eyona ngoma imfutshane yenziwa ngu-Aina Mun Piää wase-Finnish kunye nomzuzu omnye nemizuzwana engama-1.
UJohny Logan yimvumi / umbhali wengoma ophumeleleyo amaxesha amaninzi. Ngokukodwa, uphumelele lo msitho kabini njengemvumi kwaye kwaba kanye njengomqambi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Eurovision 2019
Uyisebenzisa njani i-Uber